ओसाका देखि टोक्यो सम्म - कसरि ओसाका देखि टोक्यो सम्म जाएँ? - Samurai and Ninja in Japan
ओसाका देखि टोक्यो सम्म – कसरि ओसाका देखि टोक्यो सम्म जाएँ?
कसरि ओसाका देखि टोक्यो सम्म जाएँ? Shinkansen छिटो रेल र अन्य ट्रांसटिनटिन विकल्पहरू
ओसाका देखि टोक्यो सम्म जाने को सबै भन्दा राम्रो तरीका Shinkansen तेजी देखि रेल छ। शंकसेन्सेन छिटो रेलको लागत (ओसाका-टोक्यो) एकै तरिकाको लागि 13600 छ । राउण्ड ट्रिपको लागि लागत लगभग 27200 छ । ओसाका-टोक्यो शंकसेन्सन सवारी लगभग3घण्टा छ। पहिलो शंकसेन्सन छिटो रेल 6:30 पूर्वाह्न ओसाकाबाट प्रस्थान गर्दछ । अन्तिम शंकसेन्सन छिटो रेलगाडी ओसाका बाट 21:20 बजे प्रस्थान गर्दछ। त्यहाँ हरेक 10 मिनेटको शंकसेन्सन बुलेट ट्रेन सेवा छ । तपाइँ अनलाइन रिजर्भ गर्न सक्नुहुनेछ तर यो स्टेशनमा टिकट खरीद गर्न अधिक सुविधाजनक छ।
Shinkansen फास्ट रेलवे देखि ओसाका सम्म टोक्यो
JR-PASS ले तपाईंलाई शंकसिंसेन छिटो रेल प्रयोग गर्न निःशुल्क प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईंसँग JR-PASS छ भने, तपाईं केवल HIKARI-SHINKANSEN प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग JR-PASS छ भने, तपाईं सबै शंकसेन्सन छिटो रेलहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। जापान पुग्नु अघि कृपया JR PASS खरिद गर्नुहोस्। जापानमा आइपुग्दा तपाई जेआर-पास खरिद गर्न सक्नुहुन्न।
पहिलो3वैगहरू गैर-आरक्षित छन्, तपाइँ जहाँ चाहानुहुन्छ त्यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। अन्य वैगनहरू आरक्षित छन्, तपाईंले आफ्नो सिट खोज्नु पर्छ। तपाईं shinkansen बुलेट ट्रेनमा (तपाईंको सबै होइन) मा आफ्नो फोन वा ट्याब्लेट चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं शुक्रबार साँझ यात्रा वा सार्वजनिक बिदाहरूको समयमा (जस्तै, गोल्डेन हप्ता, नयाँ वर्षको पूर्व, आदि) तपाइँ गैर-आरक्षित खण्डमा सिट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। कृपया तपाईंको टिकट पहिल्यै आरक्षित गर्नुहोस्।
Shinkansen छिटो रेल को एक लक्जरी सेक्शन छ। यो खण्डको नाम “हरियो कार” हो। तपाई यो विशेष खण्ड जेआर-PASS सँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाइँ ¥ 5300 थप अतिरिक्त भने तपाइँ “हरा कार।” प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं shinkansen छिटो रेल मा स्यान्डविच र लंच बक्स खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। लागत लगभग 1000 येन हो।
विमानस्थलको छिटो र शंकसेन्सन बुलेट रेल भन्दा सस्ता छ। अधिकांश मानिसहरूले शंकसेन्सेन बुलेट ट्रेन छनौट गर्दछ किनकि हवाईअड्डा शहरको केन्द्रमा छैन। हवाई जहाज टिकट आरक्षित गर्न कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
यात्रा गर्ने सस्तो तरीका बस लिनको लागि हो। आधी रात सम्म बस सेवा छ। बसको लागत अनुमानित ¥ 4000 ~ ¥ 6000। अधिकांश मानिसहरू बस छनौट गर्दैन किनकि यो शंकसेन्सन बुलेट रेल भन्दा3गुणा कम छ। बसको तालिका जाँच गर्न कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Shinkansen बुलेट ट्रेन अनलाइन रिजर्व गर्न।
हामी शंकसेनसेन बुलेट ट्रेन लिन सुझाव दिन्छौं) एक अनौपचारिक सांस्कृतिक अनुभव बी) ट्राभिक स्टेसनहरू सहरमा केन्द्रित केन्द्रमा अवस्थित छन् c) एक शंकसेनसेन बुलेट ट्रेन सेवा प्रायः घ) तपाईं रेलगाडीमा टिकट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ (बिना बाहेक व्यस्त बिहानको घण्टा)।
Categoriesब्लग Nepali Tagsओसाका, ओसाका देखि टोक्यो सम्म, ओसाका देखि टोक्यो सम्म यात्रा, कसरी ओसाकाबाट टोक्यो सम्म पुग्ने, कसरी गर्ने, छिटो रेल, जापान, जापान मा यात्रा, जापानको परिवहन, टोक्यो, ट्रेन, बस, बुइलेट ट्रेन्स, यातायात, यो कस्तो लागत लाग्छ, शंकसेनसेन फास्ट ट्रक, हवाई जहाज
Previous PostPrevious ဟီရိုရှီးမားကနေကျိုတိုမှ – ဘယ်လိုကျိုတိုမှဟီရိုရှီးမားကနေသွားပါသလော
Next PostNext टोक्यो देखि ओसाका सम्म – कसरि टोक्यो देखि ओसाका सम्म जाए?